Ihu igwe nke ụwa: njirimara, nhazi ọkwa na mkpa | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 07/09/2021 08:31 | Climatology
Na ụwa anyị enwere ọtụtụ ụdị ihu igwe dị iche iche dabere na mpaghara ebe anyị hụrụ njirimara ha. Ndị ihu igwe ụwa Enwere ike kewaa ha dị ka okpomoku ha si dị, ahịhịa ndụ na ihe meteorological na -ejupụta ebe a. Enwere ihe ụfọdụ ga -eburu n'uche nkewa a, yabụ na a ga -amụrịrị nke ọ bụla n'ime ha nke ọma.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe bụ ihu igwe kachasị n'ụwa na kedu njirimara ha.
1 Ihu igwe nke ụwa
2 Nhazi ọkwa ihu igwe nke ụwa
3 Mkpa iru mmiri
Enwere ike ịkọwa ihu igwe dị ka ọnọdụ mgbanwe na -agbanwe agbanwe ka oge na -aga. N'ezie, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla na ahịrịokwu a. Anyị ga -akọwa ya nke ọma na omimi. Mgbanwe ihu igwe bụ ọnọdụ okpomọkụ, mmiri ozuzo (ma mmiri ozuzo ma ọ bụ snow), ọnọdụ ebili mmiri, ikuku, nrụgide ikuku, wdg. Ọ dị mma, setịpụrụ mgbanwe ndị a niile nwere ụkpụrụ n'ime afọ kalenda.
A na -edekọ ụkpụrụ niile nke mgbanwe ihu igwe ma nwee ike nyochaa ya n'ihi na ha na -adị nso n'otu ọnụ ụzọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na Andalusia, edeghị okpomọkụ ọ bụla n'okpuru -30 degrees. Nke a bụ n'ihi na ụkpụrụ okpomọkụ ndị a adabaghị na ihu igwe Mediterranean. Ozugbo anakọtara data niile, a na -ekewa ihu igwe na mpaghara dabere na ụkpụrụ ndị a. A na -eji osisi oyi dị n'ebe ugwu mara oke oyi, oke ifufe, mmiri ozuzo n'ụdị snow, wdg. Njirimara ndị a na -eme ka a kpọọ ha ihu igwe pola.
Nhazi ọkwa ihu igwe nke ụwa
Enweghi ike ịhazi ihu igwe nke ụwa dịka mgbanwe meteorological a kpọtụrụ aha n'elu si dị, mana ihe ndị ọzọ metụtara, dịka ịdị elu na latitude ma ọ bụ ịdị anya nke otu ebe n'ihe metụtara oke osimiri. Na nhazi nke na -eso, anyị ga -aghọta nke ọma ụdị ihu igwe dị na njirimara ihu igwe ọ bụla. Ọzọkwa, n'ụdị macroclimate ọ bụla, enwere ụfọdụ subtypes zuru ezu nke na -eje ozi mpaghara pere mpe.
A na -eji ihu igwe dị elu amata ọnọdụ ihu igwe ndị a. Nkezi afọ okpomọkụ dị ihe dị ka ogo 20 ma enwere naanị nnukwu ọdịiche n'etiti oge. Ha bụ ebe ahịhịa na oke ọhịa, nwere oke iru mmiri na n'ọtụtụ ọnọdụ, oke mmiri ozuzo. E nwere ụdị subtypes dị iche iche nke ihu igwe na -ekpo ọkụ. Anyị ga -enyocha ihe ha bụ:
Ọnọdụ ikuku ụwa. Dị ka aha ya na -egosi, ọ bụ ihu igwe nke na -agbagha agbaru. Mmiri ozuzo na -aba ụba n'afọ niile, iru mmiri dị elu, ihu igwe na -adịkwa ọkụ mgbe niile. A na -ekesa ha na mpaghara Amazon, Central Africa, Indonesia, Madagascar na Yucatan Peninsula.
Ọnọdụ ihu igwe. Ọ dị ka ihu igwe gara aga, belụsọ na ọ gbadara mpaghara ebe okpomọkụ nke Cancer na Capricorn. Naanị ihe dị iche bụ na mmiri ozuzo ebe a na -ezu naanị n'oge ọkọchị. Enwere ike ịchọta ya na Caribbean, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, akụkụ ụfọdụ nke South America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, akụkụ Australia, Polynesia, na Bolivia.
Ala kpọrọ nkụ subtropical ihu igwe. Ọnọdụ ihu igwe a nwere oke okpomọkụ yana mmiri ozuzo na -adịgasị iche n'ime afọ. Enwere ike ịhụ ya na ndịda ọdịda anyanwụ North America, ndịda ọdịda anyanwụ Africa, akụkụ nke South America, Central Australia, na Middle East.
Ọzara na ọkara ọzara. A na -eji ihu igwe mara oke ikuku n'afọ a, na ọdịiche dị na okpomọkụ n'etiti ehihie na abalị pụtara nnọọ ìhè. Enweghi iru mmiri ọ bụla, ahịhịa na anụmanụ dị ụkọ na oke mmiri ozuzo. A na -ekesa ha na Central Asia, Mongolia, Midwest nke North America na Central Africa.
A na -amata ha site na nkezi okpomọkụ dị ihe dịka ogo 15. N'ebe ihu igwe ndị a, anyị nwere ike ịhụ na oge nke afọ na -adịgasị iche iche. Anyị na -ahụ na a na -ekesa ya n'etiti etiti latitude 30 ruo 70 ogo site na latitude. Anyị nwere ụdị subtypes ndị a.
Ihu igwe Mediterranean. N'ime njirimara ya bụ isi, anyị na -achọpụta na oge ọkọchị kpọrọ nkụ nke ukwuu, anwụ na -achakwa, ebe oyi na -ezo. Anyị nwere ike ịchọta ya na Mediterenian, California, ndịda South Africa na ndịda ọdịda anyanwụ Australia.
Ihu igwe ndị China. Ihu igwe a nwere ajọ ifufe na oyi na -atụ nke ukwuu.
Ihu igwe. Ọ bụ ụdị a na -ahụ na mpaghara ụsọ mmiri niile. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, a na -enwekarị oke igwe ojii na mmiri ozuzo, n'agbanyeghị na ha enweghị oke okpomọkụ n'oge oyi ma ọ bụ ọkọchị. Ọ dị n'ụsọ osimiri Pacific, New Zealand, na akụkụ Chile na Argentina.
Ihu igwe kọntinent. Nke a bụ ihu igwe dị n'ime ụlọ. Ha na -apụta na mpaghara enweghị oke osimiri. Maka nke a, ha ga -ekpo ọkụ wee jụtụ oyi na mbụ maka na enweghị oke osimiri dịka onye na -ahụ maka okpomọkụ. A na -ekesa ihu igwe a na Central Europe na China, United States, Alaska na Canada.
N'ọnọdụ ihu igwe ndị a, ọnọdụ okpomọkụ anaghị adịkarị karịa ogo 10 Celsius, a ga -enwe oke mmiri ozuzo n'ụdị ice na snow.
Oke ihu igwe. Nke a bụ ihu igwe juru ebe niile na mkpanaka ụwa. A na -eji ọnọdụ okpomọkụ dị ala mara ya n'ime afọ ahụ, na n'ihi na ala na -ajụ oyi kpamkpam, ahịhịa adịghị.
Ihu igwe Alpine. Ọ dị na mpaghara ugwu niile dị elu, a na -ejikwa oke mmiri ozuzo mara ya na ọnọdụ okpomọkụ na -agbada elu.
Mkpa iru mmiri
Iru mmiri bụ ihe dị mkpa n'ịchọpụta ike nke gburugburu ebe obibi ịnabata ndịiche dị ka ihu igwe si dị. Na ihu igwe kpọrọ nkụ mmiri ozuzo kwa afọ bụ ihe na -erughị ikuku ikuku nwere ike ime kwa afọ. Ha bụ ihu igwe nke ahịhịa ahịhịa na ọzara.
Iji chọpụta ma ihu igwe kpọrọ nkụ, anyị na -enweta oke mmiri ozuzo na mm. Iji gbakọọ ọnụ ụzọ, anyị na -amụba ọnọdụ okpomọkụ kwa afọ site na 20, wee gbakwunye ma ọ bụrụ na 70% ma ọ bụ karịa nke mmiri ozuzo dara na semester ebe anyanwụ dị 280. Nke kachasị (site na Eprel ruo Septemba na mpaghara ugwu ụwa, Ọktoba ruo Mach) na mpaghara ndịda ụwa), ma ọ bụ ugboro 140 (ma ọ bụrụ na mmiri ozuzo n'oge ahụ dị n'etiti 30% na 70% nke oke mmiri ozuzo), ma ọ bụ ugboro 0 (ọ bụrụ na oge ahụ dị n'etiti 30% na 70%) Mmiri na -ezo erughị 30% nke oke mmiri ozuzo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ihu igwe n'ụwa. Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihu igwe dị iche iche nke ụwa, kedu ihe bụ njirimara na nhazi ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ihu igwe nke ụwa